श्रीकृष्णले १६ हजार गोपिनीका पति बनेर कसरी बाँडे प्रेम ? - Baikalpikkhabar
कृष्णको गोपिकाहरुसंगको प्रेम र सोह्र हजार रानीहरुको घटनालाई यदाकदा चर्चाको विषय बनाउने गरिन्छ । उनका १६ हजार श्रीमती थिए भन्ने चर्चा गर्दै यसलाइ विभिन्न कोणबाट चर्चा परिचर्चा र आलोचना पनि गरिन्छ । त्यसका साथै कृष्णका अनेकौं लीलामध्ये सोह्र हजार गोपीनीहरूको लिला पनि सुनाउने गरिन्छ । आखिर कसरी श्रीकृष्णले सोह्र हजार गोपीनीसँग विवाह गरे त ? यसको खास रहस्य भने यस्तो छ ।
गोपी र राधासँगको प्रेम निश्चय पनि एक विशेष घटना हो र यदि कुनै प्रेमी र प्रेमिका त्यस उच्च कोटिमा पुगेका छन् जहाँ कृष्ण र गोपिनीहरु थिए भने त्यस प्रेमको वर्णन उनहरुले गर्न सक्छन् ।
श्रीकृष्ण एक पूर्ण पुरुष थिए । कृष्णमा सम्पूर्ण पुरुषोचित गुण थिए । उनी आकर्षक थिए । बहादुर थिए । निर्णायक थिए । असल रक्षक थिए । समाजका हित चिन्तक थिए । योग्य पुत्र थिए । योग्य मित्र थिए । गायक थिए, संगीतज्ञ थिए । नर्तक थिए । घिउदूधमा बालबालिकाहरुको पहिलो अधिकार स्थापना गरेर बाल अधिकारका प्रतिपादक बनेका थिए । त्यस्ता विशेष पुरुषलाई प्रेम गर्ने गोपिनीहरु धन्य भएका थिए । कृष्ण जस्ता अतिमानवको प्रेम पाएर गोपिकाहरु पनि धन्य भएका थिए ।
भागवत ग्रन्थको रासलीलामा त्यो प्रेम ज्यादै सुन्दर र पवित्र रुपमा प्रकट गरिएको छ । राधाको चरित्र भागवतमा पाइंदैन । राधा र कृष्णको प्रेमको अभिव्यक्ति पनि ज्यादै सुन्दर छ । कसको निम्तोमा मथुरा जाने समयमा प्रेमी कृष्णले प्रेमिका राधासँग अन्तिम विदाई लिएका छन् । यस विदाईमा भगवान श्रीकृष्णले आफ्नी प्रेमिका लागि बजाएको मुरली अब अरु कसैका लागि नबज्ने उपहार प्रदान गरेर बिदाई दिएका थिए ।
ब्रज छोडे पछि कृष्ण फेरि कुनै गोपिनीसँग भेट गर्न कहिल्यै पनि फर्केनन् । यसबाट कृष्णको प्रेमको पवित्रता स्पष्ट हुन्छ । कृष्णको प्रेम त्यागमा रुपान्तरित हुने प्रेम थियो वासनामा रुपान्तरित हुने प्रेम थिएन । गोपिनीले कुन स्तरको प्रेम गरेका थिए भन्ने उदाहरण मीराको कृष्ण प्रेमले दिन्छ । जसले संसारमा एक कृष्ण बाहेक अरु कसैलाई पनि पुरुष देख्दैनथिन् ।
त्यस समयमा नरकासुर नाम गरेको एक पतित र व्याभिचारी राजा थियो । जसले कन्याहरुलाई जबरजस्ती पक्डिएर ल्याउंथ्यो र यौनसम्बन्ध राख्थ्यो । त्यसपछि जेलमा थुनेर राख्थ्यो । यसरी उसले हजारौं कन्याहरुलाई दूषित गरेका थिए । ती कन्याहरुलाई कसैले मुक्त गर्न सकेको थिएन । पौराणिक कथाहरूका अनुसार एक दिन देवराज इन्द्रले श्रीकृष्णलाई प्राग्ज्योतिषपुरका दैत्यराज नरकासुरको अत्याचारका बारेमा अवगत गराएका थिए । इन्द्रको प्रार्थना स्वीकार गरेर श्रीकृष्ण आफ्नी प्यारी पटरानी सत्यभामाका साथ गरुडमा सवार भएर प्राग्ज्योतिषपुर पुगे । त्यहाँ पुगेर भगवानले मुर दैत्यको वध गरे।
मुर दैत्यको वध भएको खबर पाएपछि नरकासुर आफ्ना सेनापति तथा दैत्यहरूको सेनालाई साथ लिएर युद्ध गर्न आयो । नरकासुरलाई स्त्रीको हातबाट मर्ने श्राप थियो । त्यसैले कृष्णले सत्यभामालाई सारथी बनाउए र घोर युद्धपछि अन्त्यमा उनले सत्यभामाको सहयोगमा उसको वध गरिदिए। यसरी नरकासुरलाई श्रीकृष्णले मारेपछि उसको पुत्र भगदत्तलाई अभयदान दिएर उसलाई प्राग्ज्योतिषको राजा बनाए । नरकासुरले अपहरण गरेर राखेका १६ हजार कन्यालाई उनले मुक्त गरिदिए । उनले ती सबै कन्याहरुलाई मुक्त गरे अनि सबैका घरघर पठाई दिए ।
घर गएका कन्याहरु पुनः कृष्णकहाँ फर्के । उनीहरुले कृष्णलाइ भन्न थाले कि उनीहरुलाई न त समाजले स्वीकार गर्यो न परिवारले । त्यतिमात्र नभइ उनीहरुलाइ अरु कसैले विवाह गर्न पनि मानेन । ती १६ हजार कन्याहरुले कृष्णका अगाडि आफ्ना पीडा सुनाउन थाले । हजारौं नारीहरुको यो क्रन्दन सुनेर कृष्णले तत्काल निर्णय गरे र भने, ‘तिमीहरु आजदेखि कृष्ण पत्नी भयौ ।’कृष्ण पत्नी भएपछि तिमीहरुको सम्मानको जिम्मेवारी पनि मेरो भयो ।” यसरी कृष्ण सोह्र हजार पत्नीका पति हुन पुगेका थिए ।
सोमबार, १४ भदौ, २०७८, बिहानको ०८:५१ बजे